ရေချိုးခေါင်း အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း - သတင်း - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
1) ရေထွက်ပေါက် အနေအထားအရ၊ top spray shower၊ hand shower နှင့် side spray shower ဟူ၍ သုံးမျိုးရှိသည်။
လက်ကိုင်ရေချိုးခန်းသည် အိမ်ထောင်စုတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ လက်ဖြင့် ကိုင်ထားခြင်းဖြင့် ဆေးကြောရန် သို့မဟုတ် socket သို့မဟုတ် လျှောထိုင်ခုံပေါ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။
2) ပစ္စည်းဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်- ABS အင်ဂျင်နီယာ ပလတ်စတစ်၊ ကြေးနီနှင့် သံမဏိစတီးလ် ဟူ၍ အသုံးအများဆုံး ရေချိုးခန်းသုံး ပစ္စည်းများ ရှိပါသည်။ ပလပ်စတစ်ရေချိုးခေါင်းများ: ABS ရေချိုးကန်ခေါင်းများသည် လက်ရှိတွင် စျေးကွက်၏ အများစုအတွက်ဖြစ်ပြီး 90% ခန့်ရှိသည်။ ယေဘုယျအကျဆုံးရေချိုးခေါင်းများဤပစ္စည်းမှ ABS ပလပ်စတစ်ရေချိုးခန်းတွင် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနှင့် အသွင်အပြင်ကုသမှုများပါရှိပြီး ပေါ့ပါးပြီး အသုံးပြုရအဆင်ပြေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးသို့ တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကြေးနီရေချိုးခေါင်း: ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့်၊ စတိုင်များနှင့် ရိုးရှင်းသော ပုံစံအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အခြေခံအားဖြင့် single-function ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် လေးလံပြီး အသုံးပြုရန် အဆင်မပြေပါ။ လက်ရှိတွင် စျေးကွက်တွင် ကြေးနီရေချိုးခြင်း အလွန်နည်းပါးပြီး ၎င်းတို့ကို PVD မျက်နှာပြင် ကုသခြင်းအတွက် အများစု အသုံးပြုကြသည်။ ပြည်တွင်းမှာထက် ပြည်ပနိုင်ငံတွေက ပိုများတယ်။ စတီးလ်ရေချိုးခန်းခေါင်း- ကြေးနီရေချိုးခေါင်းထက် ပုံစံပြုလုပ်ရန် ပိုခက်ခဲသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အခြေခံအားဖြင့် တစ်ခုတည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သောကြောင့် စတိုင်လ်နှင့် မော်ဒယ်လ်အခြေခံသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော်၊ Stainless Steel ရေချိုးခေါင်းသည် အားသာချက် ၃ ချက်ရှိသည်- ၁။ ရေချိုးခေါင်းကို အရွယ်အစား ကြီးမားစေပြီး အပေါ်ရေချိုးခန်းသည် ရှည်သည်။ Hekuan သည် တစ်မီတာထက် ပိုရှည်နိုင်ပြီး အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်များ သို့မဟုတ် အိမ်ကြီးများ၏ ရေချိုးခန်းမျက်နှာကျက်တွင် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ 2. ရေချိုးခန်းကို အလွန်ပါးလွှာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အပါးလွှာဆုံးအပိုင်းမှာ 2MM ခန့်ရှိပြီး လှပပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိသည်။ 3. ကုန်ကျစရိတ်သည် ကြေးနီရေချိုးခန်းများထက် နိမ့်သောကြောင့် သံမဏိရေချိုးခန်းများသည် ကြေးနီနှင့် ပတ်သက်သော စျေးကွက်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။
3) ရေထွက်ပေါက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အရ ရေချိုးခြင်းကို single-function shower နှင့် multi-function shower ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ အသုံးများသော ရေထွက်ပေါက်နည်းလမ်းများတွင် ရေချိုးရေ၊ နှိပ်နယ်ရေ၊ တောက်ပြောင်သောရေ (ကော်လံမာရေ/ပျော့ပျောင်းရေဟုလည်း ခေါ်သည်)၊ ဖြန်းရေနှင့် ရောနှောထားသောရေ (ဆိုလိုသည်မှာ ရေချိုးရေ + နှိပ်နယ်ရေ၊ ရေချိုးရေ + ဖြန်းရေ စသည်ဖြင့်) နှင့် အခေါင်းပေါက်၊ ရေလှည့်ပတ်ခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောရေ၊ ရေတံခွန်ရေ စသည်တို့သည် အလွန်ကွဲပြားသော ရေထွက်ပေါက်နည်းလမ်းများ။ အခြေခံအားဖြင့် ရေချိုးခန်းအားလုံးတွင် သမားရိုးကျ ရေဖြန်းမှု အများဆုံးရှိကြသည်။ အိမ်တွင်းဘက်စုံသုံးရေချိုးခန်းများထဲတွင် လုပ်ဆောင်ချက်သုံးမျိုးနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ငါးခုပါသည့်ရေပန်းများသည် လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဥရောပနှင့် အမေရိက စျေးကွက်များတွင် လုပ်ဆောင်ချက်5ခုထက်ပိုသော ရေချိုးခန်းများအတွက် လိုအပ်ချက်များစွာရှိပြီး 9-function ရေချိုးများပင် ရှိပါသည်။ နှိုင်းရပြောရလျှင် နိုင်ငံခြားသားများသည် ရေချိုးရေကို ပိုအာရုံစိုက်ကြသည်။ လှည့်ကွက်များ။
4) switch function point အရ- အဓိကအားဖြင့် switch ကို toggle, press switch.
rotating handle switch၊ push switch၊ face cover rotation switch စသည်ဖြင့် ကူးပြောင်းရန် နည်းလမ်းများစွာရှိသော်လည်း mainstream သည် toggle switch၊ press switch သာဖြစ်သည်။ Toggle switching သည် စျေးကွက်တွင် အသုံးအများဆုံး switching နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး key switching သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရေပန်းအစားဆုံး switching method ဖြစ်သည်။ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးက စတင်ရောင်းချနေပါပြီ။ ရိုးရှင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။